Tag: teknisiana | Martech Zone
Ny lalam-barotra manova ny varotra
Talata, Desambra 29, 2009 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Ny hetsika Techakers manaraka dia ho iray manokana! Misaotra foana aho noho ny fahafaha-miteny ary manome ny mpihaino izay tsy mitovy amin'izany ny Techmakers. Ireo mpanao teknolojia dia matihanina amin'ny teknolojia izay manaparitaka ny elanelana misy eo an-damosin'ny farany sy ny any ivelany. Misy ihany koa ny fifangaroana orinasa kely sy lehibe manatrika ireo hetsika ireo. Ny hetsika manaraka dia ao amin'ny Scotty's Brewhouse afovoan-tanàna ny talata 5 Janoary amin'ny 5:30 hariva. Manantena aho fa ho tonga ianao
Orinasa telo izay ifaneraserako akaiky no voatondro ho finalist ho an'ny Indiana's Mira Awards: ExactTarget - tsy isalasalana miaraka amin'ny fitomboana sy ny fitarihana mahafinaritra fa ity orinasa ity dia ho mpandray mendrika ny loka. Misy sombin'ny rafitry ny ExactTarget izay manohitra tsotra izao ny lalàn'ny fizika amin'ny fomba haingana hamokarany sy handefasana mailaka. Tiako ny 2 taona sy tapany niasako ho an'ny ExactTarget! Amin'ny Alatsinainy, izaho